Ubuchwepheshe | Julayi 2021
Nakhu Okwenza Zonke Izidingo Zomzali Wezinhlanzi Zitshale Ku-Smart Aquarium
Thola ikhaya elingcono kakhulu lezilwane ezifuywayo zasemanzini nge-smart fish aquarium engaqinisekisa izilwane ezifuywayo impilo enempilo nephephile.
Amadivayisi ama-5 ama-Smart Odinga Izitshalo Zakho Zangaphakathi
Letha le mishini ebalulekile yokulima engadini ezosiza izitshalo zakho zasendlini zikhule kahle uma ungekho!
Amaphrinta aphezulu ayi-5 wokusetshenziswa kwasekhaya eNdiya
Lawa angamaphrinta amahle kakhulu emakethe yokusetshenziswa kwasekhaya eNdiya asebenzisa isabelomali. Lawa angamaphrinta amahle kakhulu emakethe yokusetshenziswa kwasekhaya eNdiya ukuthi a
Kufanele Ube Namagajethi Wokuqina Wokuzivocavoca Kwakho Okuvela Ekhaya
Qala unyaka wakho ngenothi elifanele nalokhu kumele ube namagajethi okwenza umsebenzi wakho ekusebenzeni kwasekhaya ube ngcono kakhulu.
Imishini Ephezulu Yekhishi Likagesi Okufanele Ube Nayo
Yonga isikhathi nomzamo ngezinto ezintsha zasekhishini ezisebenza ngogesi ezenze wonke umsebenzi ohlobene nekhishi waba lula.
Ama-Smartwatches Ama-5 Amahle Wokutshala Imali
Iwashi elihlakaniphile lingaba yigugu elibalulekile empilweni yakho nasekukhiqizeni kwakho. Nalu uhlu ongakhetha kulo.
Amadivayisi Okufanele Ube Nawo Ukusiza Ukuhlanzeka Izingubo Zakho
Nikeza izingubo zakho ukunakekelwa okwengeziwe okubafanele. Lawa madivayisi azoklina izingubo zakho ngaphandle kokuziwasha.
Izizathu Okufanele Utshale Ezingeni Lomlilo Likagesi.
Lezi yizizathu odinga ukuthi utshale imali eziko likagesi lekhaya lakho elithandekayo. Lezi yizizathu odinga ukutshala imali kuziko likagesi lakho
Ikhibhodi engenantambo noma ikhibhodi enentambo?
Sikufake embozweni ngokubhekisisa kahle imininingwane ezokusiza ekuthathweni kwesinqumo phakathi kwamakhibhodi anezintambo nawezintambo
Izinto Ezigqokekayo Ezihlakaniphile Ongaphuthelwa Zizo
Ukugqokwa okuhlakaniphile kungukuthuthuka okuhle kwezobuchwepheshe okwenze impilo yaba lula ngobuchwepheshe babo obuthuthukisiwe
Ama-eBooks: Isixazululo Sesikhathi Esisha Sabathandi Bezincwadi.
Uma uthanda ukufunda nokuhamba, ama-eBooks yisixazululo esihle kuwe. Baphathe efonini yakho, kumathebulethi, e-reader futhi ufunde noma nini lapho uthanda
Izinto Okufanele Uzicabangele Ngaphambi Kokuthenga Ukuqapha Kwezingane
Ukuqapha ingane kuyinsimbi elula nokho ebalulekile ekusiza ukuthi uhlole ingane ngenkathi ukwelinye igumbi. Thola lezi zinto ngaphambi kokuzithenga
Ungamisa Kanjani Ogaxekile be-Spam futhi Ungcolisa ibhokisi lakho lokungenayo unomphela
Sonke siyayazi le milayezo ecasulayo, engadingeki futhi engaba yingozi, kodwa esifuna ukukwazi ngempela ukuthi singamisa kanjani ama-imeyili ogaxekile ekugcobeni ibhokisi lethu lokungenayo futhi asenze sihlanye.
Angikaze Ngicabange Ukusebenzisa Ithebhulethi Ngize Ngithole Izandla Zami ku-Amazon Fire HD 10
Umcabango wokuthenga ithebhulethi awuzange ufike emqondweni wami ngize ngivivinye i-Amazon Fire HD entsha 10. Nakhu ukubuyekeza kwami ​​okuthembekile nokuthi kungani kufanele ucabangele ukuyithenga.
Ngiyazi ukuthi Ngimdala, Kepha Kusho Ukuthini Isihogo?
Wake wacathama walunguza efonini yentsha? Kufana nekhodi laseSoviet - banezifinyezo zayo yonke into. Thola okushiwo yi-bae namanye ama-acronyms e-intanethi.
I-Amazon Ineziphesheli ezi-4 ezinkulu ze-AirPod Ngaphambi Kosuku Lokuqala
Ulungele ukukhipha umsindo? Lezi zinhlobo ezi-4 ezihlukile zama-Apple Airpods okwamanje ziyathengiswa ngaphambi kwe-Amazon Prime Day.
Ingabe Unecala 'Lokungeziwe'? Nakhu Okushoyo Ngempela
Igama elengeziwe libonakala linamandla amakhulu okuhlala, ngakho-ke nakhu okushoyo unomphela.
Nakhu okushiwo yiFleek, kanye naphakade
Unezifinyezo ze-inthanethi ezikhiyiwe. Kepha awunakukwazi ukuthi intsha ejwayelekile ikhuluma ngani. Nayi inkomba yokukhuluma nge-tech okungenangqondo.
Ungayibamba Kanjani I-Virtual Secret Santa Party Okungeyona Inhlekelele Engenisa Imikhuba
Qagela? USanta oyimfihlo ungene ku-inthanethi kulo nyaka futhi sihlanganise umhlahlandlela osebenzayo wokuqinisekisa ukuthi iphathi yakho eyimfihlo yaseSanta iyimpumelelo ephelele (hhayi inhlekelele ebangela ukububula).
I-Google Inesici Esikuvumela Ukuba Ubone Ukuthi Inja Yakho Yephupho (noma i-Dinosaur) Ingena Kanjani Endlini Yakho
Isici sezilwane se-3D se-Google sivumela abasebenzisi ukuthi bazitike nge-AR ethile (ngokoqobo okungeziwe) kusuka kuma-Smartphones abo ukuze bathole usayizi wempilo wokuthi konke kusuka ekutholeni kwegolide kuye kuVelociraptor kuzolunga kanjani endlini yakho.
ama-movie ngomlando wezwe
izingcaphuno zokubonga kubangani
kanjani tie sarong
hollywood ama-movie wezothando
ukwelashwa kwezinwele ezihamba phambili ekhaya